I-Arsene Wenger Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
Ikhaya UMPHATHI weFOOTBALL I-Arsene Wenger Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
I-LB ibonisa iNqaku elipheleleyo loMphathi webhola owaziwa kakhulu ngeSiza; 'NguNjingalwazi'. Ibali lethu le-Arsene Wenger Childhood kunye ne-Untold Biography Facts ikuzisa i-akhawunti epheleleyo yeziganeko eziphawulekayo ukususela kumntwana wakhe kuze kube ngumhla. Uhlalutyo lubandakanya ibali lobomi bakhe phambi kobuqili, ubomi bentsapho kunye ne-OFF kunye ne-ON-Pitch eyaziwayo into eyaziwayo ngaye. Ngokungathandabuzekiyo, abaninzi abalandeli bayamjonga njengomnye wabaphathi abaphezulu kwihlabathi ngenxa yohlobo lwakhe lokuphatha kunye nokuphila kwakhe kwi-Emirates. Ngoku vumela uqale oko ukulindele.
I-Arsene Wenger Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Ubomi boBantwana bokuqala.
Arsene Wenger; Ibali leNtsana yabantwana
UArsène Wenger wazalelwa eStrasbourg, enyakatho-mpuma yeFransi ngomhla we-22nd ku-Oktobha ngo-Oktobha 1949 kuyise, uMnumzane Alphonse Wenger, uMphathi webhola kunye noMthengisi weBhola kunye noMama, uLouise Wenger, umnikazi weNdlanzi. U-Arsene wayesemncinci wayekude noyise ngenxa yokuzibophezela kwakhe emsebenzini. Wayengumphathi webhola lomdlalo webhola kwinqela elikude kude nekhaya. Njengomntwana kuphela, umgama osuka kubawo wathintela impilo yakhe yentlalontle. Ngenjongo yokugcina umgama osondeleyo, uMnu. Alphonse Wenger wanquma ukufudula u-Arsene kunye nomama wakhe uLouise waseStrasbourg (indawo yokuzalwa yase-Arsene) kwindawo yakhe yokusebenzela (iDuttlenheim) esecaleni kwe-20km kude kwaye imfutshane kakhulu nomda waseJamani.
U-Arsene Wenger wakhuliswa ngokugcwele eDuttlenheim, uluntu olunabantu abali-6 000 abantu. I-Duttlenheim njengokuba ngaleso sikhathi yayiyaziwa ngokuba neenja ezininzi, amahashe. Idolophu yayiyaziwa ngokuba ngabadlali bebhola. U-Arsene waziswa kwibhola ebudeni be5 nguyise owayethathe ixesha lokumvusa emdlalweni. Ukudlala iqela lommandla wendawo kunye noyise oxabisekileyo njengoko umqeqeshi wakhe wayebhekisela kuye. Ngelo xesha, iiklabhu zebhola zebhola zeDuttlenheim zaziwa ngokuba zidlala ibhola lebhola lebhola e-mpuma yeFransi. Nangona wayeyinxalenye ebalulekileyo yecala likayise, uWenger wayemele alinde ixesha elithile ngaphambi kokuba aphendule kwi-footballer. Oku kwakusekelwe kwisicelo sikayise esayithobelayo kwaye siyayihlonela. Wachitha iminyaka eyi-15 edlala ibhola lebhola lomdlalo kunye noyise njengomphathi ngaphambi kokuba athathwe yiqela lebhola lebhola lebhola ngegama elithi AS Mutzig.
I-Arsene Wenger Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Umsebenzi webhola lebhola.
Xa u-Arsene Wenger eqala umsebenzi wakhe webhola kwizinga le-amateur emuva kwi-1954 (ephakathi kwe-5), akukho yonke into eyayimalunga nemali. Kwakuyinyani ngokuthanda umdlalo. Ngethuba ekhatywayo kwebhola wayenomsebenzi wengqesho njengomthengisi wecuba.
U-Arsene Wenger Umsebenzi weBhola leBhola
Umdlali wokuqala wobugcisa beWenger njengomdlali ngu-AS Mutzig kwi-1969. Oku kwafika xa uyise wamkhulula kwikomiti ayeyilawulayo. U-AS Mutzig njengokuba wayekho kwiqendu lesithathu lebhola leFransi. U-Arsene Wenger udlala kakhulu njengomdlali okhuselekileyo kwiqela. Wakha ubudlelwane obukhethekileyo noMax Hild, umphathi weqela.
Ibhola lakhe lebhola elifanelekileyo liye ladluliselwa kuRC Strasbourg. Umqeqeshi waKhe wangaphambili Emva kokuba ukutshintshwa kugcinwe ubuhlobo obuhle naye. KwakunguMax Hild owabeka isiseko sikaWenger ekubeni ngumphathi webhola emva kokuthatha umhlalaphantsi wakhe kumdlalo.
I-Arsene Wenger Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Ukujongana nokuDakumba
U-Arsene Wenger wayephakathi kwabadlali bebhola ebonakalayo abafumana iqela labo likhuthaza ukuhlula i-1 yebhola leFransi. Unqobe iqela lakhe lokuqala lokudlala (isihloko seLigue 1) kwi-1978, yile minyaka eyi-9 emva kokudlala kwiqela. Kwamthatha iminyaka eyi-9 yeentlungu ngaphambi kokuba afumane iphupha lakhe lokuphumelela isihloko.
Ubuhlungu bokutshatyalaliswa kwavezwa kwiminyaka yakhe yokuqala yesithoba kwimisebenzi yakhe yobungcali. Nangona enye impawu ebaluleke kakhulu kuye kwakunakho ukukwazi ukujongana neemeko zokulahleka. U-Arsene Wenger wafumana uluhlu olubanzi lweemvakalelo ngexesha ngalinye elahleka ngexesha lokudlala. Wayesoloko esebenzisa ububele. Wakhe wakha umkhwa wokuhlala kwibhola lebhola emva kokulahleka okukhulu. Oku kwakuqhelekileyo ixesha elibonisa ngayo iimpazamo zakhe kunye nokuhluleka ngobubele nokuqonda. Xa ubuhlungu bokutshatyalaliswa buphelile, uxinzelelo lwakhe lubangela. Wayeza kuhlala ekhulula kwaye ehlawulela umdlalo olandelayo.
Ukuphumelela kwinqanaba lakhe lokuqala lokudlala (isihloko seLigue 1) kwi-1978, emva kweminyaka eyi-9 yobhola bezemidlalo yayisenza into ebalulekileyo. Isihloko sakhe saseFrench Isi1 isihloko asizange sifezekiswe kuphela kuye. ibonisa isizathu sokuthatha umhlalaphantsi wakhe kwibhola lezemidlalo. UArsene Wenger washiya umhlalaphantsi kungekudala emva kokuphumelela kweligi, eneminyaka eyi-32.
I-Arsene Wenger Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Umsebenzi wezoLawulo.
U-Arsene Wenger uSebenzi loMsebenzi oQalayo
Kwiminyaka emithathu nje emva kokuphelisa umsebenzi wakhe wobugcisa, uWenger wayekulungele imingeni emitsha, kuphela ngeli xesha njengomphathi oncedisayo. Wajoyina iLigue 2 kwicala laseCannes njengomphathi oncedisayo kwi-1983. Uncedise umphathi weqela lokuqala uJean-Marc Guillou, owaba ngumphathi weCote d'Ivoire. UWenger, emva kokuchitha iminyaka embalwa njengomncedisi kamva waba ngumqeqeshi weNancy-Lorraine kwi-1984. Ukutyunjwa kwakhe kwintlawulo ngenxa yeziphakamiso ezivela kumanani adumile njengo-Aldo Platini (uyise kaMichel Platini) owathokozile ekhangele ukujonga kwakhe izakhono ezimangalisayo emva koko xa wayesengumdlali. Wenza umngani wakhe uBoro Primorac, wase-Valenciennes owayengumncedisi wakhe kwi-spell yakhe eNancy-Lorraine kwi1984. Le nto yahamba kakuhle kwiminyaka emibili yokuqala. Nangona kunjalo, kamva, kwakungekho nto enhle kumFrentshi njengelungu lakhe elilawulayo. Oku kwalandelwa yilapho ixakwe kwi-1987.
U-Arsene Wenger ngaloo nyaka (1987) wathola enye incomo yokulawula i-AS Monaco. Ngethuba lokuhamba kwakhe no-Monaco ukusuka kwi-1987 ukuya kwi-1994, wathola iLigue 1 kunye neNdebe yeFrench.
UArsene Wenger ubhiyozela iNtshontsho yeNdebe eMonaco
UArsene Wenger wabonisa ukunyaniseka okukhulu kuMonaco ngokunciphisa umsebenzi wokulawula iqela leSizwe leFransi. Ngelishwa, elinye iqela lidumise. Watshitshiswa ngonyaka ozayo (1994).
I-Arsene Wenger Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Umsebenzi wezoLawulo eJapan.
Ngomhla kaJanuwari 1995, emva kwesaka edidayo evela eMonaco, uWenger wasayina isivumelwano kunye neqela laseJapane iNagoya Grampus Eight. Wayemisela umngani wakhe omhle uBoro Primorac, umphathi wase-Valenciennes ukuba abe ngumncedisi wesibini.
UArsene Wenger: Ukubhiyozela i-Cup Emperor Cup yaseJapan kwi-1995
U-Arsene Wenger usebenze nzima eJapan wahola iqela lakhe lokuphumelela i-Cup Emperor Cup ye-Japan kwi-1995.
Ngoxa wayesekho, wayethandana nesidlo saseJapan. Wayeyaziwa ukuba adle kuphela irayisi, imifuno ebilisiwe kunye neentlanzi ezingenaso ishukela kunye neoli. Kwi-intanethi yakutshanje malunga nomdla wakhe eJapan, uWenger waphendula "Kungenxa yoko awuyi kubona abantu abathobileyo."
UArsène Wenger wabhala incwadi ethi 'uMoya wokuQhuqa'
Ngethuba lokuhamba kwakhe njengomqeqeshi weklabhu yaseJapan uNagoya Grampus Eight, uArsene Wenger wabhala incwadi ethi 'Umoya Wokumqoba kwi 1997. Le ncwadi yabhalwa kuphela ngokuhlonipha ibhola lebhola laseJapan. Ngaloo nto, uWenger wabelana ngebhola kunye nefilosofi yokulawula. Wanikela ingcamango emininzi malunga neengcamango zakhe kwibhola yaseJapan.
Ukulandela iinjongo zakhe kunye nemilinganiselo yakhe kwincwadi yakhe, uWenger wafumana umvuzo we-Japanese League Manager we-Year. Eli bhaso lafika nje ezimbalwa iinyanga ngaphambi kokushiya iqela kwiArsenal enamandla.
I-Arsene Wenger Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Utyunjwa lweArsenal
Akungathandabuzeki, iimbasa zakhe ngaphambi kokujoyina i-Arsenal ziyaziwa nanamhlanje kubathandi bebhola. Yingakho siye sithatha ixesha lethu ukuvelisa eli nqaku.
Ukutyunjwa kwakhe e-Arsenal kwafika ehlobo le1996 xa iqela lalingena eBruce Rioch. Bammisela abo baninzi 'umntu ongaziwayo nomFrentshi ongaziwayo.'
Utyunjwa lweArsenal njenge-Arsenal Coach
Ukuqeshwa kuka-Arsene Wenger kwakha iingxabano phakathi kwabasekeli bebhola. Okokuqala, wonk 'ubani wamangaliswa ukuba agcine igama lakhe lokuqala likhangeleka ngokufana negama leqela labo. Ngaphezu koko, abalandeli bayamangalisa isizathu sokuba uWenger wakhethwe phezu kwegama likaBrazil uJohan Cruyff ngendima. Nangona kunjalo, izinto zimi njengoko wayeqinisekisile umphathi we-England side side.
U-vsen-wongameli we-Arsenal, uDavid Dein.
Iingxelo zibonisa ukuba u-Arsene Wenger ufumene umsebenzi we-Arsenal ngokubonga ephupheni ebusuku ngu-vsen-wongameli we-Arsenal uDavid Dein.
UDavid Dein wathi wayephupha waza wabona umbono obhalwe esibhakabhakeni esithe 'Arsene kwiArsenal!'. Ngamazwi akhe ....'Xa ndivuka, ilizwi lokuqala ndathi ... liyilo, liza kwenzeka kwaye u-Arsene weArsenal uya kwenzeka.
UWenger wakuthola kunzima ukusetyenziswa kwilizwe, iqela kunye nabalandeli emva kokuxhaswa. Wayegxininiswe kakhulu ngexesha lokuqala kwakhe njengomphathi. Iingxelo ezininzi ziboniswe ukuba wagula emva kweeveki ezimbalwa. Kwingxelo yakutshanje, uWenger uqinisekisile ngamagama alandelayo ... .. 'Xa ndiqala njengomphathi ngeArsenal, ngamanye amaxesha ndivakalelwa kukuba andiyi kuphila. Ngokwempilo, ndagula. Ukufumana i-club yam kuqala - uNancy-Lorraine-mhlawumbi ayizange incede imicimbi '.
I-Arsene Wenger Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts - Ukuguqula iArsenal Diet.
U-Arsene Wenger ufike eArsenal waba yinto yokuguqula imichilo yokutya. Wenza imimiselo eqinile kubadlali bokutya. Wavalisa amanqaku ambalwa kwaye wazisa yakhe inceba. Uphuculwe yilokho abadlali badla kunye nantoni na abayithathileyo. Ngaphandle kwe-Creatine, wayala bonke abadlali ukuba bathathe amavithamini amaninzi, i-caffeine boosters kunye neeprotheni.
Isidlo seArsenal esichazwe nguArsene Wenger
Emuva kwiminyaka engama-90 ubudala ngaphantsi kweGeorge Graham, abadlali babeza kudla i-burger kunye ne-chips ngoLwesihlanu ubusuku ngaphambi komdlalo kwaye akukho mntu wayeseve nge-creatine ngaphambili.
I-Arsene Wenger Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -NguNjingalwazi.
Uthetha iilwimi ezintandathu-isiFrentshi, isiJamani, IsiNgesi, isiSpanish, isiNtaliyane kunye nesiJapan. Izinto ezothusayo ezininzi kukuba wayengakwazi ukuthetha isiFrentshi ngokucacileyo kude kube neminyaka esixhenxe. Wafika eNgilani eneminyaka eyi-29 ukuba afunde isiNgesi kwiYunivesithi yaseCambridge. Ukukwazi kwakhe ukuthetha ezi zininzi iilwimi kubonisa izizathu zokuba kuthunyelwe kuye as 'Le profesa'.
I-Arsene Wenger Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Akalokothi Aphuze emva kokufana.
Ngethuba uSir Alex Ferguson wayedume ngokugqithiseleyo ngeglasi yewayini, uWenger akakho. Akalokothi ahloniphe isimemo esivela kubaphathi bakhe kunye nezixhobo zokusela. UAlex Ferguson uye wathi: "U-Arsene akaze athathe isiselo kunye nam emva kwemidlalo yethu". Nguye kuphela umphathi kwi-Premiership ukuba angenzi njalo.
UArsene Wenger Ungalokothi uphuze emva koMatshana
Isithethe esingasiphuzo senza izizathu zokuba kutheni abantu bamthandayo.
I-Arsene Wenger Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Ngesinye isikhathi wayebhema i-cigarette ngelixa ephantsi kwengcinezelo eMonaco.
U-Arsène Wenger utyhile indlela awayefudume ngayo ukutshiza ekuqhubeni njengomphathi omncinane. Njengomntu onentloni ngokwemvelo, ukutshaya kwangoko kwamnceda ukuba alwe noxinzelelo kunye nokuzinza.
U-Arsene Wenger uye watsho ngamazwi akhe: 'Ndandifumana ukutshaya kwindawo yokucoca njengomphathi. Umkhwa wam wokutshaya wawuzalwe kumsebenzi wangexeshana njengomthengisi we-cigarette ebudeni bam ebusheni.
I-Arsene Wenger Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -I-Asteroid egama layo emva kwayo
UArsènewenger 33179 ogama lakhe linguWenger
'Arsènewenger 33179' i-asteroid egama lingumphathi we-Arsenal ngesazi-astronomni ongumdlali othembekileyo we-Arsenal. 'UArsènewenger 33179' nguye kuphela obizwa nge-asteroid obizwa ngokuba ngumphathi webhola. I-asteroid yafunyanwa ngo-Matshi 29, i-1998 ngu-Ian P. Griffin, umtsalane wokufa we-Arsenal.
Ian P. Griffin (b. 1966) yiBrithani ngeenkwenkwezi, ukufumanisa maplanethi amancinci kunye nesithethi sikawonkewonke kwimicimbi yenzululwazi.
I-Arsene Wenger Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Ulwalamano lobomi.
UWenger wayetshatile kumdlali wangaphambili webhokisi webhola lebhokisi u-Annie Brosterhous owayekade etshatile kwisiqalo seBafana basketball uGeorge Brosterhous owayenabantwana ababini phambi kobudlelwane obude noWenger.
I-Wengers yayisebudlelwane obude obude phakathi kwe-1990s, kwaye isatshatilana kwi-2010 ngaphambi kokuqhawula kwi-2015.
Ubudlelwane boBomi bukaArsene Wenger
Umthengi oyintloko weGunners kunye nomthandi wexesha elide uAnnie, 59, kuthiwa bavumile iphakheji yemali kwaye bahlulahlula izinto zabo. Amaphepha enkundla afakwa kwilali kwidolophu yaseWenger eStrasbourg, eFrance.
Uye wavuma kwangaphambili ukuba umsebenzi wakhe ophezulu wokunyanzeliswa kunye neqela laseLondon uye wafaka uxinzelelo waza wabangela ukuphela kobudlelwane bakhe. UWenger uvume ukuba ngelixa ejoyina iArsenal, wathembisa umfazi ukuba uya kuhlala phantsi kweminyaka emihlanu. UWenger kunye neqabane lakhe elide ixesha elide u-Annie 'wahlukana nemizimba' esetyenziswe ngumgwebi eParis, oku kuthetha ukuba bakhululekile ukubona abanye abantu.
Bobabini amaqela enentombi egama linguLea Wenger. Njengomntwana osemncinci, uArsene Wenger wayemthanda kakhulu njengoko behlala befaniswa naye xa beqhuba umsebenzi wakhe webhola.
UArsene Wenger kunye neNtombi uLea Wenger
Wayeza kuhlala elandela uodade kwiinkomfa kunye nodliwano-mbuzo lokuqala. Ukuma eceleni xa ubaba esenza umsebenzi. Bobabini uWenger kunye nomfazi wakhe owayengumfazi wenyamezela omnye ude uLea wayengu 18 phambi kokuba amaqela emibini aqale ukuhlukana.
I-Arsene Wenger Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Ubambe i-BSc kwi-Economics.
Ubambe i-BSc kwi-Economics
UWenger ngokwenene uyinto yebhokisi lengqondo. Kwi-1971, wabhalisa kwi-Faculty yezoQoqosho kunye noLawulo lweeNzululwazi kwiYunivesithi yaseStrasbourg ukufunda ezopolitiko kunye noqoqosho emva kwesikhokelo esifana neyeza. Kwi-1973 wajoyina i-club yase-Mulhouse yecandelo elinobugcisa kunye nokulinganisa umsebenzi wakhe webhola ngemfundo yakhe. UWenger ugqibile i-degree degree yezoqoqosho ngonyaka.
Enyanisweni, umphathi waseFransi kamva wafumana i-Masters degree kwi-Economics yaseStrasbourg University.
I-Arsene Wenger Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -U-Arsene Wenger Vs Mourinho (ukufana kunye nokulwa).
Ukufana: UWenger, njengoJoseph Mourinho, ukhulume ngeelwimi ezahlukeneyo-isiFrentshi, isiJamani, iSiNgesi, iSpanish, isiTaliyane kunye nokutshatyalaliswa kweJapan.
Nangona kunjalo, uJoseph Mourinho ukholelwa ukuba uyisisulu sempumelelo yakhe emva kokuphendula ngokugxeka kwakhe ukulwa kwakhe ngokumangalisa ukuba akayi kunikwa inhlonipho ayifaneleyo okanye ayiphathe ngokuhlonipha njengoArsene Wenger.
U-Arsene Wenger Vs Mourinho (ukufana kunye nokulwa).
Imfazwe yamazwi phakathi kukaJose Mourinho kunye no-Arsene Wenger ayilutsha.
Nangona uJoseph Mourinho sele ephethe isandla esiphambili kwiminyaka, bobabini abaphathi banamazwi aqinileyo omnye nomnye.
UMourinho Vs Wenger (Icandelo 1):
"Andiboni ngokukodwa ukuba i-Chelsea idlala abadlali bamaNgesi ngakumbi kunathi. Ngubani oye wakhiqiza, ekhaya? Enye kuphela, uJohan Terry. " - Wenger ku-2005 xa efunyenwe kwi-Arsenal yonxibelelwano lwangaphandle.
Ekuqaleni kwexesha elilandelayo ngo-Agasti 2005, uWenger uvakalise ukukhathazeka ngeendlela zeBellen: "Ndiyazi ukuba siphila kwihlabathi apho sinabantu abaphumeleleyo kuphela nabalahlekileyo, kodwa kanye xa umdlalo ukhuthaza amaqela anqabile ukuthatha inyathelo, umdlalo usengozini. "
UMourinho wayengenakuchukumiseka. "UUWenger unenkathazo yangempela nathi kwaye ndicinga ukuba yiloo nto oyibiza eNgilani i voyeur. Ungomntu othanda ukubukela abanye abantu. Kukho abafana abathile, xa bekhaya, banesibonakude esikhulu ukubona ukuba kwenzekani kwezinye iintsapho. UWenger kufuneka abe ngumnye wabo-kukugula. Uthetha, uthetha, uthetha ngo-Chelsea. "
UWenger waphendula ngokumisa kwakhe. "UUphelelwe ngumyalelo, unqatshelwe ngokunyanisekileyo kwaye awuhloneli. Xa uphumelela kubantu abayathabatha, kubangela ukuba zibenze budenge ngezinye izihlandlo kwaye zingabalulekanga. "
UMourinho Vs Wenger (Icandelo 2): Oku kwenzekayo xa uMourinho ephethe i-Real Madrid kunye no-Xabi Alonso noSergio Ramos bafumana izizathu ezicacileyo ngokumelene neGalatasaray ukwenzela ukuba banqamle umlenze wesibini okhululekileyo kunokuba bangabikho emngciphekweni kwimidlalo ebalulekileyo kamva kwikhomishana, uWenger wayeninzi
UWenger wathi; "Xa ubona indlela ebukeka ngayo kumabonwakude, umboniso obalaseleyo wokucinga: 'Ungaze wenze njalo kwakhona'. Kubukeka, ngokucacileyo, ngokukrakra. Kubuhlungu ukubona loo nto kwiklabhu enkulu. "
Kwakhona, kuphumelele kuphela ukuphazamisa impendulo evuthayo evela eMourinho ... "Endaweni yokuthetha nge-Real Madrid, uMnumzana Wenger kufuneka athethe ngeArsenal aze achaze indlela alahlekelwe ngayo i-2-0 kwiqela kwi-Champions League okokuqala. Imbali malunga nezingane eziselula zikhulile ngoku. Sagna, Clichy, Walcott, Fabregas, Ingoma, Nasri, Van Persie, Arshavin ayingabantwana. Bonke abadlali abaphezulu. "
UArsene Wenger Vs Mourinho (iMfazwe).
UMourinho kuWenger (umbulali ohamba)
NgoFebruwari 2014, emva kweeveki ezimbalwa emva koko, uWenger wabuzwa ukuba kutheni abanye abatyebileyo beArsenal bathemba kakhulu ukunyaniseka kwabo. "Ukwesaba ukungaphumeleli," uthe.
UMourinho wanikela ngesigxina esingenakulibaleka ekuphenduleni. "Ngaba ndiloyiko lokungaphumeleli? Uyingcali ehlulekayo. Andingo. Ngoko ke umntu xa ecinga ukuba ulungile kwaye ndiloyiko lokungaphumeleli, kungenxa yokuba andinakulibala amaninzi amaninzi. Ngoko mhlawumbi ulungile. Andisetyenzisiwe ukusilela. Kodwa inyaniso kukuba ingcali yokuba, iminyaka eyisibhozo engenaye isiqwenga se-silverware, oko kungaphumeleli. "
Emva kweminyaka elishumi yokunyeliswa ngamagama, ukugqithisana kwagqitywa kwenyama ngo-Oktobha 2014 xa uWenger emduduza uMourinho ngexesha lokuphikisana kumgca we-Stamford Bridge.
"Xa ndikhumbula, ndicinga ukuba andifanele ndiphendule," uthe uWenger. "Akuyona indlela yokuziphatha kwibala lebhola. Ngaba uMourinho wandichukumisa? Yiloo ndlela endandiziva ngayo. Andizange ndingene kwindawo yezobugcisa yase-Chelsea. "
Kwaye xa kuphakanyisiwe kuMourinho ukuba umlingani wakhe weArsenal angahlawuliswa ... "Ku hlawulwa? Ukuba bekuyimi, bekuya kuba yinqanaba lezemidlalo. "
UWenger wanikela ithuba lokugubha isandla sikaMourinho emva koko ekugqibeleni ebenokubambisana nomdlali wakhe kwi-Community Shield ngo-Agasti 2015 - kodwa yiPutukezi ehambisa ii-jibes ezilandelayo.
I-Arsene Wenger Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -UArsene Wenger Vs u-Alex Ferguson (ukufana kunye nokulwa).
Ukuxabana kukaWenger kunye noMenen u-Alex united u-Alex Ferguson uyinto eqhelekileyo kodwa konke kwafika kwi-crescendo xa uWenger usolwa ngokuphonsa i-pizza ku-Sir Alex emveni komdlalo. "Pizzagate" kwenzeke e-Old Trafford ngo-Oktobha 2004, apho iUnited yagqiba i-Arsenal ye-49-imidlalo engaqhubekiyo.
Kwikhamera, emva komdlalo, uWenger wabiza uRuud van Nistelrooy "Ukukopela", kunye nokugqibela kwe2007 Carling Cup "Uxoki" ezo zazikho kwikhamera. Umqeqeshi ojongene nokuzola kunye noqinileyo uye wavuma ukuba unendawo ebumnyama kakhulu.
UArsene Wenger, Iimfazwe eziMnandi kunye namaxesha amaninzi kakhulu.
Watsholwa nge-£ 15,000 intle nguMbutho weBhola kunye nakwizinto zakhe zendalo uSir Alex wavuma loo nto "Pizzagate" ayenayo "Wakhankanya ingqondo kaArsène" kwaye bangela ukuba ubudlelwane babo budibanise iminyaka engamahlanu.
"Unomsindo"- njengokuba uSir Alex Ferguson wayekhumbula ngokugqithiseleyo xa exelela ihlangothi lakhe ngebali elibi kakhulu lePizzagate. "URuud van Nistelrooy wangena egumbini lokugqoka waza wakhalaza ngokuthi uWenger wayemnikele njengoko eshiya. Ngokukhawuleza ndakhawuleza ndathi kuArsene: 'Ushiya abadlali bam bodwa.' Wayecaphukisa ngokulahlekelwa ngumdlalo. Yayiyo isizathu sokuziphatha kwakhe kokulwa. 'Kufuneka uhambe kubadlali bakho, ndamxelela. Wayenomsindo. Izibonda zakhe zazingeniswa ukuba ndigxeke. Kodwa ndilawulwa, ndazi.
I-Arsene Wenger Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -I-Arsenal ye-Undefeated League Season.
Inyaniso ebaluleke kakhulu ngoWenger kukuba u-Arsenal wamphatha kwixesha elingenamsebenzi.
Esi sigqwesileyo esikhulu sasiqhutywe ngaphambili ngu-Preston North End i-115 kwiminyaka edlulileyo! Iqela liye laphula iRekodi ye-Nottingham Forest yeemidlalo ze-42 ezingenakuze zaza zanqoba iimpawu eziyisixhenxe ngaphambi kokulahleka ngo-Oktobha 2004. Wow 49 unbeaten ligi matches! Oku kubonisa amandla abo aphezulu.
I-Arsene Wenger Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Iminyaka edlulileyo ye-20 kwiKlabhu.
Emva kwamashumi amabini e-Arsenal, i-15 trophies, i-stadium entsha kunye ne-£ 700m esetyenzisiweyo kubadlali, u-Arsene Wenger waziwa ngokuba ngumphathi welizwe elide kakhulu elikhonzayo nelona liphumelele eli lizwe.
Kodwa ifa likaWenger liza kuthini? Kwabanye, unembopheleleko yokuguqula umdlalo wesiNgesi. Kwabanye, impumelelo yakhe yokuqala yanyanzeliswa kwaye uya kugwetywa ngokuqhutywa kweeminyaka eyi-12 ngaphandle kwesihloko sokudibanisa.
Abadlali baseGranten u-Thierry Henry uthetha ngo-Arsene Wenger malunga nokuphakama kwexesha elidlulileyo kunye no-20 iminyaka ephethe iArsenal.
I-Arsene Wenger Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Wazisa uGeorge Weah kwiBhola laseYurophu.
Kuye kwathethwa ezininzi malunga nendlela uWenger amlethe ngayo uTererry Henry ongamnquliyo ukusuka kuJuventus ukuya eArsenal waza wamenza umdlali omkhulu njengoko siyazi ngoku. Kodwa bambalwa bayazi ukuba ngo-1988 wasayina umdlali ongaziwayo waseLiberia, weza u-Weah waya eMonaco, oya kuqhubeka waba ngumdlali weFIFA World World of 1995.
I-Arsene Wenger Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Ukhuseleko kwiintlungu.
Pi-ain ibe yinxalenye ebalulekileyo yobomi kubalandeli baseArsenal kunye no-Arsene Wenger. Wonke umntu uyazi ukuba u-Arsene Wenger akazange aphakamise i-Champions League, kodwa ngokungaxelwanga ngokungathandabuzeki ngokubhekiselele kwinani leentlanzi kunye nabo bonke abalandeli baseArsenal ababenalo, i-League Cup nayo ibalekile nayo.
Ukungaxhatshazwa Kwintlungu ngeeFaneli zeArsenal
I-Gunners ifikelele ekugqibeleni phantsi kweWenger, ilahlekelwe yi-Chelsea kwi-2007 naseBirmingham kwi-2011.
I-Arsene Wenger Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -I-Big Fan kaBob Marley.
UWenger ungumdlali omkhulu kaBob Marley.
UArsene Wenger, A Big Fan kaBob Marley.
Kwiingcamango zakhe kuBob Marley, uWenger watsho; Ewe, ndiyayithanda umculo wakhe kunye nendoda ebenguye, "watsho. 'Akazange' akhiwe '. Wa ye yinyani. Ndiyayithanda abantu abangenazo iindlela eziqhelekileyo kwaye baphuma ngenxa ye talente yabo.
Fonkem primus Antepioh Nge-9 kaMeyi ngo-2017 ngo-10: 54 pm
kuhle kakhulu ekuqulunqeni abadlali. Ukuba uthe wahlala ngoku, akayi kuba nokuzisola. Mthande ubabalo lukaThixo
UJack Wilshere Ibali leNkwenkwe yobuntwana kunye ne-Untold Biography Facts
I-Alexis Sanchez Ibali leBantwana leNdaba ye-Untold Biography Facts
I-Mertesacker Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
I-Nwankwo Kanu Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts